Masaajida Sweden oo isku qilaafay Ciida! | Somaliska
Masaajida Sweden ayaa si weyn isugu qilaafay dhalashada bisha Shawwal iyo ciida. Masaajidka weyn ee Stockholm iyo ururka Islaamka Sweden (Islamiska Förbundet) ayaa isbuucii hore shaaciyay in ay barito oo talaado ah ay ciid tahay, halka galabta ay Sacuudiga shaaciyeen in aysan ciid ahayn taasoo ay ku raaceen masaajid kale oo ku yaala Sweden.
Hadda ayaa waxaa socoto jahwareer ku saabsan in ay barito ciid tahay iyo in kale, iyadoo bishii aan laga arag wadamada Muslimiinta balse masaajida Stockholm iyo kuwo kale ay ku adkaysteen in ay barito ciid tahay.
Arintaan ayaa ka dhex abuurtay qilaaf xoogan Muslimiinta Sweden oo ciidihii hore si wada-jir ah u ciidi jiray.
July 4, 2016 at 23:31
Fududaanta ayaa keeneyso iskhalaafka
Asc qilaafka ma fiicna bishii Shawaalna lama arkin marka yaan leysku qilaafin Sweden bil lagana arkin ee sidee köp ciidaa?
July 5, 2016 at 00:39
Birito waa Ciid, shiikha uugu weyn tuulada aan ku noolahay ayaa yiri.
dadkii misaajidka joogay way isku khilaafeen, aayado iyo axaadiis ayay koox walba soo qaadatay.
lkn anagu mar hadaanan diinta wax badan ka aqoon waxaanu raacnay shiikha hadalkiisa, sidaa darteed birito waa ciid.
July 5, 2016 at 00:51
Barii waa ciid masajidka kristianstad
abdulahi kahin says:
July 5, 2016 at 00:57
qararac da soomaalida manay arag waana ciid kulahaa
July 5, 2016 at 03:11
War ileen tan oo kale yaa arkey beri waa soon ciid maha aduunka oo dhan majirto meel bisha laga arkey caalamka islaamkana Saudi Arabia ugu weyn tahay beri waa soon marka qof hadalkiisa oo wiliba asaga bishaan arkey laheyn yaanan loo afurin yurub oo dhan ayaa beri soon ah marka masjid dhahey beri ciid waaye yaanan lagu afurin ciida waa arbaco
July 5, 2016 at 03:55
Khilaaf badan aa jiro Ciida sanadkaan anige waa soo ma nahay magaaladeene waa soon dadka oodhan
July 5, 2016 at 13:44
Anagna waa ciidbay na dhaheen oo maanta waanu ciidnay barina insh allh waanu ciidi waa wada ayaamo ilaahay ciid mubarak وكل عام وانتم بخير🙌🙋🙋
waxa la yiri celmi ha laguu dhigee caqliga ku kaasho dadka maanta afuray mexey ku afureen caalamka islaamka lagama arag bishii ayaa la leeyahay ma qof hadalkiis ayaa lagu afurayaa sharuudaha lagu afurikaro waa wada naqaane waxan qabaa in la qalday dadkaas lkin wey soo qaleyn karan